Raha araka ny fanazavan’ny dokotera Fidy Bariniaina mantsy dia tafahoatra loatra ny fihinanan’ny ankizy sakafo be siramamy toy ny mofomamy sy ny paty ohatra ankoatra ireo karazan-tsakafo vaovao hita sy miseho any anatin’ireo dokam-barotra maro samihafa ireny. Fa ankoatra izay hoy hatrany ity dokotera ity dia tsy dia mampiasa vatana ihany koa ny ankizy tratra ireny hatavezana tsy ara-dalana ireny. Tsy mba manokan-tena mandeha dia an-tongotra kely rehefa mamonjy fianarana ohatra fa variana mitaingina taxi-be hatrany no sady manao facebook, tranga iainan’ireo ankizy eto an-drenivohitra. Vahaolana tsotra aroson’ny dokotera Fidy araka izany ny hihinanana amin’ny antony ireo karazan-tsakafo ahitana ny hery fiarovana sy ny hery fiasana . Toraka izany koa legioma sy ny voankazo izay tokony hanao betsaka tokoa ankoatra ny fisotroana rano iray litatra isan’andro. Tsiahivina moa fa raha mirefy 1 m sy 40 ohatra ny olona iray dia tokony ho 30 kg ny lanjany ara-dalana, izay hoe : analana isa folo hatrany amin’ny halavana tarehimarika faharoa dia fantatra ny tokony ho lanjan’ny vatana.